Apple waxay dekada ogaanshaha ka saareysaa Apple Watch Series 7 | Wararka IPhone
Laga bilaabo berri, Oktoobar 15, cutubyada ugu horreeya ee Apple Watch Series 7 waxay bilaabi doonaan inay gaaraan kuwa ugu nasiibka badan. Bari saacad cusub Apple toddobaadyo ka dib ayaa loo suuqgeeyay iPhone 13 dhibaatooyin xagga waxsoosaarka ah, in kasta oo aysan jirin xaqiijin rasmi ah oo ka timid Big Apple. Si kastaba ha noqotee, adeegsadayaasha qaarkood ayaa mar hore soo galay oo xaqiijiyay taas godka leh dekedda ogaanshaha qarsoon ee ku jirtay moodooyinka qaarkood sida Apple Watch Series 3 kuma sii jirto Apple smartwatch -ka cusub. Waxaa laga yaabaa in lagu beddelay qayb cusub oo laga helay gudaha taas oo oggolaanaysa wareejinta xogta in ka badan 400 mbps.
Nabadgalyo dekadda ogaanshaha qarsoon ee taxanaha Apple Watch 7
Apple Watch ma jirto deked ama dalool ku wajahan isticmaalaha. Waxaan ku dallaci karnaa oo keliya saldhigga ku -dallacidda birlabka ee ku jira sanduuqa ama dhinacyada kale ee saddexaad. Si kastaba ha ahaatee, sanado ka hor ayaa la soo bandhigay deked ogaansho oo qarsoon taasi waxay u saamaxday Apple inay ilaaliso saacadaha smartwatch. Waxay ku hoos jirtay tab yar oo ku taal dhinac ka mid ah halka aan gelinay qayb ka mid ah suunka.
Waa rasmi! Apple Watch Series 7-Pre-Order wuxuu bilaabmayaa Oktoobar 8
Apple Watch Series 7 -kii ugu horreeyay ee garaacaya fasaxa saxaafadda dhugasho in Apple ayaa ka saartay dekadda ogaanshaha jiilkeeda cusub ee saacadaha caqliga badan. Tani waxay ku kasban lahayd shahaadada IP6X boorka u adkaysta ee jiilalka kale ka maqnaayeen.
Si kastaba ha ahaatee, dekadda si aan micne lahayn loogu huray. Waxaa la og yahay in saacadda gudaheeda uu jiro modul cusub oo awood u leh inuu isku xiro inta jeer ee 60,5 GHz bilaa wireless. Tani waxay u oggolaan doontaa Apple Gal aaladda si aad u soo celiso watchOS ama aad samayso baaritaanka dayactirka. Tani waxay u baahan tahay saldhig lacag -bixin ah oo ka shaqeeya isla inta jeer ee FCC xaqiijisay inay jirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple waxay dekada ogaanshaha ka saareysaa Apple Watch Series 7
AirPods Pro ee soo socda ayaa ku dari kara dareemayaasha heerkulka, saxnaanta saxda ah oo xitaa noqon kara dhegeysiga
Dhowr xanta ayaa soo jeedinaya in Apple ay AirPods 3 ku soo bandhigi doonto Keynote Isniinta